Tsy Kamiao Mpitondra Sakafo io. Fa Lakozia Afaka Mandehandeha izay Mamahana Mpitsoa-ponenana Manerana an’i Eoropa. · Global Voices teny Malagasy
Tsy Kamiao Mpitondra Sakafo io. Fa Lakozia Afaka Mandehandeha izay Mamahana Mpitsoa-ponenana Manerana an'i Eoropa.
Voadika ny 22 Marsa 2016 6:19 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Français, Ελληνικά, 繁體中文, 简体中文, 日本語, 한국어, English
Ghafoor Hussain sy ny rahalahiny Fazel mijoro eo ivelan'ny fiara fitanteram-bahoaka novàna ho lakozia afaka mandehandeha ao Ghafoor. Manome sakafo mafana 3.000 sy dite amin'ny kaopy 10.000 isanandro izy ireo. Sary: Adeline Sire. Nampiasaina miaraka amin'ny fahazoandàlana avy amin'ny PRI
Ity lahatsoratr'i Adeline Sire ity ho an'ny The World dia niseho voalohany tao amin'ny PRI.org ny 10 Febroary 2016, ary navoaka eto indray ho anisan'ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Na aiza na aiza misy azy ireo, mila miaramilan'ny mpiasa an-tsitrapo ny ankabeazan'ny tobin'ny mpitsoa-ponenana mba hanampy hizara lamba firakotra, fitafiana, ary indrindra fa sakafo sy rano.
Tena miasa amin'ny fony ny sasany amin'ireo mpiasa an-tsitrapo ireo.
Nandritra ny taona maro, nanolotra ny fotoanany mba hanampy amin'ny fanomezana sakafo sy fitafiana ny mahantra i Ghafoor Hussain. Niala an-tranony tany Stockton-on-Tees any avaratra atsinanan'i Angletera izy tamin'ny fararano farany teo ka nankany amin'ny tobin'ny mpifindra monina tany Kroasia, Slovenia ary Aotrisy.
Nefa raha tonga tao amin'ny toby iray tany Aotrisy izy, dia nahita fa mofo voasesika efa mangatsiaka no nomena ny mpitsoa-ponenana. Ary nanapaka hevitra izy fa mila sakafo mafana izy ireo — ary mety ho izy irery no manome izany.
Ankehitriny tsy mionona fotsiny amin'ny fandehanana amin'ny toby izy, nitondra fiara fitateram-bahoaka izay novidiany tamin'ny alalan'ny tranonkala tamin'ny Desambra lasa teo, ary novainy miaraka aminà fitaovana manokana.
“Naverinay tany amin'ny garazy izay hiasako ilay izy ary noravanay tanteraka ka ny zana-drahalahiko no nanampy kely ahy mba anovàna azy ho lasa lakozia arifomba afaka mandehandeha,” hoy Hussain, izay 44 taona.
Ghafoor Hussain (faharoa avy any ankavanana) miaraka amin'ny ekipany mpiasa an-tsitrapo. Nanapaka hevitra ny hanome sakafo mafana ny mpitsoam-ponenana izy rehefa nahita azy ireo mihinana mofo voasesika efa mangatsiaka. Sary: Khalid Siddiqi. nampiasaina miaraka amin'ny fahazoandàlana avy amin'ny PRI
Lakozia matihanina misy kodiarana ilay fiara fitateram-bahoaka, misy latabatra fanomanana roa, koveta roa fitatazana, fatana dimy mandeha amin'ny entona fandrehitra amidy eny an-tsena ary fitehirizan-drano iray 260 gallons (1000 litatra). Any aoriana sy any ambany no misy ny fitoerana sy fitahirizana entona. Nitentina $9.000 ny fividianana sy ny fanatsaràna ilay fiara, fa nahazo fanampiana avy amin'ny namana sy ny mpiara-miasa aminy izy.
“Nanomboka nanao hetsika ny olona rehetra, ary nahazo vola fiaingàna izahay,” hoy izy. “Nanome sakafo sy fitafiana ary zava-drehetra ny olona. Ary nomen-dry zareo fanomezana ihany koa aho, toy ny vola, araka izany tamin'ity maraina ity, nivoaka ny trano fanatobiana entana izahay ary nividy fitoeran-drano roa.”
Hatramin'ny tapaky ny volana Janoary, nijanona tao amin'ny tobin'ny mpifindra monina tao Grande-Synthe akaikin'i Dunkirk (Dunkerque), any amin'ny faritra avaratr'i Frantsa ilay lakozia afaka mandehandeha an'i Hussain. Ny zaodahiny no nitondra nanomboka tany UK. Efa tany am-boalohany no nikasa hijanona amin'ireo toby manaraka ny zotran'ny mpifindra monina izay mandeha mamakivaky an'i Eoropa Afovoany i Hussain, nefa nahazo antso an-telefaona izy nilaza taminy fa ratsy ny toe-piainana tao amin'ity toby frantsay ity ka mila ny fanampian'izy ireo. Ny zanany no navelany niandraikitra ny garazim-pianakaviana mba hahafahany mifantoka tanteraka amin'ny lakoziany afaka mandehandeha.
Manome sakafo mafana sahabo ho 3.000 isan'andro ho an'ny olona miaina anaty lay ao an-toby i Hussain ankehitriny. Zava-pisotro mafana ihany koa.
“Manao dite 5.000 kaopy isa-maraina izahay, ary mbola manao dite 5.000 kaopy amin'ny hariva,” hoy izy. “Araka ny tsapanareo dia tena mangatsiaka ny maripàna, ka mivaingana daholo ny zavatra rehetra io maraina io. Ary tsy misy zava-pisotro mafana manerana ny toby ankoatry ny omenay.”
Momba ny sakafo, nilaza i Hussain fa mahandro vary, voanemba, voanjobory, tsaramaso mena, tsaramaso mainty maso, paty sy “porridge” ry zareo. Ambara ny marina, tsy nahita fahombiazana ny “porridge” tao amin'ity tobin'ny mpitsoa-ponenana ity izay Kiorda ny ankamaroany. Koa satria Silamo ny ankabeazan'ny olona eto, tahaka an'i Hussain, dia sakafo avy amin'ny zavamaniry no ahandroiny mba hisorohana ny filàna hena Halal. Lafo ary sarotra ny mahazo izany ao amin'ity tanàna kely frantsay ity.
Ghafoor Hussain no lehibe mpifehy ao amin'ilay lakoziany afaka mandehandeha. Nilaza izy fa mihevitra azy ho “somary adala” ny fianakaviany. Sary: Tally Oliver. Nampiasaina miaraka amin'ny fahazoandàlana avy amin'ny PRI
Manakaiky ny $450 ny vola laniny amin'ny fanomanana sakafo 3.000 isanandro, nefa tsy nanahy tamin'ny tsy fahampiam-bola izy. Milaza izy fa mahazo fanomezana avy any Eoropa manontolo, ary koa avy any Abu Dhabi sy Pakistana, izay nahaterahany.
“Ny fomba fandehan'ny zavatra rehetra miaraka amin'ny namako sy ny fianakaviako,” nihomehy malefaka izy, “Tsy mieritreritra aho fa ho lany ny renivolako. Tena tsara fanahy izy ireo.”
Ary nilaza izy fa fotoana maharitra no hijanonany eto, raha mbola misy koa ny fanohanana voarainy. Fa inona ny eritreretin'ny fianakaviany amin'izy any lavitra any?
“Mihevitra ahy ho somary adala izy ireo, “hoy izy sady nihomehy, “Nefa manohana ahy tanteraka ny fianakaviako. Manantena ny hiverina [hody an_trano] aho, mandritra ny andro vitsivitsy amin'ny herinandro manaraka, ary miverina indray avy eo sy manohy mandeha.”
Raha ny zava-misy, vao nividy fiara fitateram-bahoaka iray hafa i Hussain, ka tsy ho ela dia ho lasa lakozia ampy fitaovana tanteraka, mba hanomezana fahafaham-po ny fitomboan'ny tinady amin'ny sakafo mafana ao amin'ny toby.
Ginea-Bisao 3 andro izay